5-ta jimicsi ee ugu xun hadaad ladnaato | Soo bax? Ka fogow layliyadaan
5ta jimicsi ee ugu xumaa haddii aad soo baxdo
03 / 10 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles, Jimicsiga iyo Jimicsiga, Soo noqo, Jimicsiyada xoog, tababarka/av waxyeelladayda
Ma leedahay prolaps? Ka dheerow shanta jimicsi! Kuwaani waxay sii xumayn karaan xanuunka waxayna u horseedi karaan bogsasho liidata. Xor baad u tahay inaad la wadaagto qof ay saameeyeen prolapse. Ma haysaa wax talo soo jeedin ah oo ku saabsan jimicsiyada wax u dhimi kara dhabarkaaga? Ii sheeg qeybta faallooyinka ee qeybta hoose ee maqaalka ama at Facebook.
Jimicsiga iyo dhaq-dhaqaaqa badiyaa way fiican yihiin - xitaa haddii aad ku xanuunsato cillad diska ku dhaca - sida ku cad awooddaada, dabcan. Laakiin waxaa jira jimicsiyo iyo jimicsiyo sii xumeyn kara calaamadaha soo noqoshada, cilladaha neerfaha iyo xanuunka - gaar ahaan kuwa siiya cadaadiska caloosha ee sareeya ama cadaadiska saxannada. Waa kuwan 5 jimicsi oo ay tahay inaad iska ilaaliso haddii aad leedahay herniation disc. Dabcan, waxaa jira dhowr jimicsi oo noqon kara layliyo xun, laakiin halkan waxaan ku soo xulnay shan qaybood. Waxaan tilmaamnay inay tahay dil khalad ah oo aan ugu horeyn diirada ku saareyno qodobkaan - tanina waa xulasho layliyo badan oo qaladaad sameeya iyagoon muruqyo xasiloon oo si fiican u tababaran.
1. Cadaadiska lugta
Cadaadiska lugaha waa jimicsi ay adagtahay in si sax ah loo qabto - dad badanna lugaha ayey si aad ah ugu dhawaadaan ka hor inta aysan riixin. Tani waxay sababi kartaa in culeyska lagu go'doomiyo maqalkaaga hoose ee jirka isla markaana abuuri karo cadaadis aad u sarreeya oo ka dhan ah saxannada - taas oo u horseedi karta waxyeello sii kordheysa oo ku jirta saxannada, taas oo si joogto ah ugu horseedi karta xanuun iyo astaamo ka sii daraya.
A: Naqshad qaldan. Miyaad aragtaa sida dhabarku u foorarsado markaad socotid oo lugahaaga ku durug? Tani waa waxa u horseedi kara dhibaatooyinka disk-ka. Taabadalkeed, horay ujooji sida ku cad sawirka xiga (B).
B: Fulinta habboon ee layliga. Ha ka leexin jilbahaaga 90 darajo ka badan.
Qalabka maqaarka ee 'intervertebral disc' waa naxdinta dambe. Markaad ordeyso, gaar ahaan meelaha adag, tani waxay u horseedi kartaa culeys sare oo ku saabsan saxannada hoose ee dhabarka - taas oo xanaaqa ka xanaajin karta. Sidaa darteed, way fiicnaan kartaa inaad ku socotid dhul aad u xun haddii aad leedahay cillad la yaqaan oo cillad leh - ugu yaraan illaa aad ka dhisto muruqyada asaasiga ah, muruqyada xasilloonida ee jilibka iyo sinta, oo aad ku noqotid shaqo wanaagsan dhaawaca ka dib. Marka dhaawaca bogsado, waxaad tartiib tartiib ugu dari kartaa orodka / orodka nidaamka jimicsigaaga markale.
3. Fadhi-ku-dirir bilaa taageero ah oo qalooca
Waxaan si xoog leh kugula talineynaa inaad dhabarkaaga hoose ka taageerto joodariga jimicsiga ama kubbadda jimicsiga haddii aad sameynayso fadhi-ku-fadhiis. Qaabka fadhi-ku-jirka ee jirka kor u aad u sarreeyaa isla markaa isla marka uu wareego waa in laga fogaadaa haddii aad leedahay cillad la yaqaan oo cillad ah. Waxaa jira qaabab kale oo wanaagsan oo loogu talagalay tababar jilicsan oo caloosha iyo muruqyada asaasiga ah - sida jimicsiyada cadaadiska caloosha hoose-dhexe dhir firfircoon og jaakad.
4. "Qoryaha wax lagu qaybiyo" oo leh kubbad daawo ama miisaan lacag la'aan ah
Layligani wuxuu galayaa meel adag oo qaloocsan oo qalloocan - waxaa laga yaabaa in tani xitaa ay ahayd xitaa booskaas aad haysatay markii ugu horreysay ee aad ka xanaajisay cilladdaada diska? Waxaan kugula talineynaa inaadan jimicsiga ku sameynin foorarsiga, wareejinta iyo culeyska kordha ee qaab kubbadeed ama culeys. Haddii aadan haysan saxammo is-dhex-dhexaad ah oo adkeyn kara in ka badan annaga 'dadka caadiga ah ee waddada jooga'. Haa, jimicsiyo la mid ah ayaa shaqeyn kara in muddo ah, laakiin waqti ka dib, culeyskani wuxuu u horseedi karaa dhaawacyo maqaarka ah iyo xanuun sii xumaanaya.
5. Hore u laabo lugaha toosan
Kala-baxani wuxuu dareemi karaa sida 'dhabarkaaga ayuu daryeelaa', Laakiin runtu waxay tahay haddii si khaldan loo sameeyo, waxay cadaadis aad u sareysa saareysaa saxannada hoose ee dhabarkaaga hoose. Haddii aad ka fikirto fiisikiska, waad arki kartaa sida xoogagga dabiiciyan ay tahay inay u soo maraan dhismooyinka hoose ee dhabarka ka hor inta aanad hoos ugu foorarsan xagga dhulka. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in la isku dayo in gadaal dambe loo ilaaliyo qalooca dhexdhexaadka ah marka layligan la sameynayo.
A: Xukun aan sax ahayn. Adiga oo dhabarkaaga u jajabinaya, miskaha ayaa gadaal u laaban doona oo waxaad la kulmi doontaa cadaadis dheeri ah oo ku saabsan fahanka hoose ee dhabarka hoose.
B: Xukun aan habboonayn Qalooca dhexdhexaad ee dhabarka iyo miskaha saxda ah ayaa tan ka dhigaya fiditaan wanaagsan.
Waxaan kugula talineynaa inaad ku tijaabiso layliyadaan cadaadis caloosha oo hooseeya oo la xaqiijiyay - iyadoo lagu saleynayo aqoonta tababarka Stuart McGill:
Ciyaaraha Samee jimicsi cadaadis ah oo caloosha ku dhex jira oo prolapse ah
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Benpress.jpg?media=1648573622 466 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-10-03 19:20:182018-04-03 10:42:085ta jimicsi ee ugu xumaa haddii aad soo baxdo
8 jimicsi oo loogu talagalay xanuunka dhabarka Berg iyo Dalbane way ka saari karaan Nyrestein